ကိုယ်ဝန်ရှိ မရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် ကိုယ်ဝန်ရှိ မရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတွေ ဒါမှမဟုတ် အတူနေချစ်သူနဲ့ လိင်ကိစ္စပုံမှန်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာတော့ ကိုယ်ဝန်သံသယဆိုတာ ရှိတတ်ကြမှာပါပဲ။
အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင်တော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေ အနည်းနဲ့အများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီတခေါက် သိလိုရာမေးကနေ အမျိုးသမီးအများစု ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အခါမျိုးမှာ တွေ့ကြုံရတတ်တဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက္ခဏာ (၁) ရာသီလာချိန်မမှန်ဖြစ်လာမယ်…
ဒါကတော့ လူအများစုရင်းနှီးပြီးသား ကိုယ်ဝန်ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်ရှိရင် ရာသီမလာတတ်တဲ့အတွက် အများစုကတော့ ရာသီလာရမယ့် ရက်မှာ မလာတော့ရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလားဆိုပြီး စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ကိုယ်အလေးအချိန်အတက်အကျမမှန်တာ စတဲ့ အချက်တွေကြောင့်လဲ ရာသီလာချိန်နောက်ကျနိုင်တဲ့အတွက် ဒီအချက်တစ်ခုထဲကြောင့်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့လဲ အတိအကျပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။
လက္ခဏာ (၂) ရင်သားပြောင်းလဲမှု
အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်စရှိလာပြီဆိုရင် ရင်သားတွေ တင်းလာမယ်၊ အထိမခံနိုင်လောက်အောင် နာကျင်တာမျိုးလဲရှိနိုင်ပြီး အရွယ်အစားပြောင်းလဲတာမျိုးတွေလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင် နို့သီးခေါင်းပတ်ပတ်လည်မှာ အရောင်ရင့်လာတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
လက္ခဏာ (၃) မောပန်းလွယ်ခြင်း
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်စရှိစအချိန်တွေမှာ ဟိုနား ဒီနား သွားရုံလာရုံနဲ့ မောနေတာ၊ ပင်ပန်းလွယ်တာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်တွင်းမှာ ပရိုဂျက်စတိုရုန်းဟော်မုန်းက မြင့်တက်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဟော်မုန်းမြင့်တက်ခြင်းက သွေးပေါင်ချိန်ကျတာမျိုးတွေ၊ ကိုယ်တွင်း သကြားဓာတ်လျော့နည်းနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် မောပန်းလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။
လက္ခဏာ (၄) ပျို့အန်ခြင်း
အမျိုးသမီးအားလုံးကိုတော့ မဆိုလိုပေမယ့် အများစုကတော့ ကိုယ်ဝန်စရှိပြီဆိုတာနဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ အစာမကြေတာ၊ မအီမလည်ဖြစ်ပြီး ပျို့တာ အန်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်။
လက္ခဏာ (၅) ဆီးခဏ ခဏ သွားခြင်း
အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ဝန်စရှိပြီဆိုတာနဲ့ နောက်အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ ဆီးခဏ ခဏသွားတဲ့အပြင် ပုံမှန်ထက် ဆီးအများကြီး သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိစမှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် သားအိမ်က ကျယ်လာပြီး ဆီးအိမ်ကို ဖိထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ခုပြောပြထားတဲ့ အချက် (၅) ချက်ကတော့ အမျိုးသမီးအများစု ကိုယ်ဝန်ရှိစအချိန်မှာပြတတ်တဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီး ဒီလက္ခဏာတွေ ကိုယ့်ဆီမှာတွေ့နေရပေမယ့်လဲ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ အတိအကျသိနိုင်ဖို့ အသေချာဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ဆီးစစ်တံကိုအသုံးပြုပြီး Pregnancy Test လုပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။